WAR CUSUB: Mohamed Salah Oo Doonaya Inuu Iskaga Tago Liverpool, Tababare Jurgen Klopp Oo Sabab U Ah & Wargeyska AS Ee Madrid Kasoo Baxa Oo War Cusub Keenay. - GOOL24.NET
Wargeyska kazoo baxa dalka Spain gaar ahaan magaalo madaxda dalkaas ee Madrid ee lagu magacaabo AS ayaa keenay war cusub oo xasaasi ah isaga oo qoraya in Liverpool ay waayi karto suuqa xagaagan xiddigeeda Mohamed Salah waliba sababta tababare Jurgen Klopp.
Wargeyska ayaa sheegaya in muran aan wuxuu ahaa la xaqiijin oo dhex maray Mohamed iyo Jurgen uu dhaliyay in xiddiga ree Masar uu noqdo mid aad u cadhaysan taas oo ku qasabtay inuu ku fikiro inuu gabi ahaanba kooxda ka baxo.
Warka ayaa intaas ku daraya in Salah uu doodaas u qaatay si dhab ah oo uu ku fikirayo inuu kooxda u gudbiyo warqada codsiga bixitaankiisa marka xilli ciyaareedku dhammaado.
Goorta ay dhacdadan dhex martay Salah iyo tababarihiisu dhacday ayaa lagu sheegay inay tahay mudo kahor waana sida ay AS kasoo xaqiijisay xubno kamid ah qolka labiska Reds.
Xaalada ilaa haatan ee Mohamed Salah ayaa lagu sheegay mid aan is beddelin balse ay mulkiilayaasha kooxdu ku qanciyeen inuu horta diirada saaro sidii uu kooxda xilli ciyaareedkan ugula guulaysan lahaa tartamada Premier League iyo Champions League balse ay taa bedelkeeda xagaagan ka caawin karaan sidii uu kooxda uga bixi lahaa hadduu ku adkaysto.
Warkan ayaa hadiiba uu rumoobo la filayaa inuu kiciyo kooxo badan oo ree Yurub ah gaar ahaan Barcelona iyo Real Madrid oo doonayay mudo kahor balse la saxeexan waayay kaddib markii ay Liverpool diiday inay xataa wax wada xaajood ah la gasho.
Maanta ayuunbay ahayd markii Sadio Mane uu isna meesha ka saaray fursad kasta oo uu kaga baxayo Liverpool balse warkan kale ayaa ah mid qas ku dhalin kara qolka labiska kooxda.